बाँकेमा मौलाउदै बेश्याबृत्तिः बेश्याबृत्ति गर्नेलाई किन कारबाही गर्दैन बाँके प्रहरी ? — Paschimnews.com News From Nepal
बाँकेमा मौलाउदै बेश्याबृत्तिः बेश्याबृत्ति गर्नेलाई किन कारबाही गर्दैन बाँके प्रहरी ?
नेपालगञ्जको पुष्पलालचोक नजिकको एक होटलबाट वडा प्रहरी कार्यालय, नेपालगञ्जको टोलीले छापा मारेर दुई जोडीलाई नियन्त्रणमा लियो । होटलको कोठा नम्बर ३०१ मा दुई जोडी मदिरामा मस्त थिए ।
३०१ सँगै उनीहरुले २०२ नम्बर कोठा पनि बुक गरेका थिए । वडा प्रहरीका इन्चार्ज नारायण डाँगीले छापा मारेर उनीहरुलाई ल्याए । राती १२ बजे वडा प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर राखियो । एक मोटरसाइकल कम्पनीको सोरुममा काम गर्ने व्यक्ति थिए, उनीहरु । विराटनगरबाट नेपालगञ्ज आएको बेलामा ‘रमाइलो’ गर्न होटलमा पुगेका थिए ।
ती व्यक्तिले वडामा ल्याउदा नै ‘इज्जत बचाइदिनु पर्‍यो, के के सहयोग गर्नुपर्छ गर्छौ’ भन्दै रोइकराई गरिरहेका थिए । प्रहरी निरीक्षक डाँगीले उनको कुरा सुनेनन् । र, भोलीपल्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइदिए ।
युवतीहरु बर्दियाका हुन् । नेपालगञ्जमै बसेर धन्दा सञ्चालन गर्ने गरेको स्रोतले बतायो । १२ हजार रुपैयामा त्यो दिन बुक भएका थिए ।
जिप्रकाले उनीहरुलाई कारबाही नगरी छोडिदियो । जिप्रकाले कारबाही नै नगरी छोड्नु थियो भने वडाले किन निन्द्रा फालेर रातबिरातमा होटलमा छापा मारेर पक्राउ ग¥यो ? यतिबेला नेपालगञ्जमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
जिप्रकाले चारै जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाएर पठाइदिएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्य नियन्त्रण ऐन २०६४ ले बेश्यागमन गर्नेलाई एकदेखि तीन महिना कैद र दुईदेखि पाँच हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । प्रहरीले यिनीहरुलाई कुनै पनि कारबाही गरेन । एक रात थुनिनुलाई नै कारबाही मान्यो ।
तपाईले समातेको जोडीलाई त जिप्रकाले छोडिदिएछ त ? वडा प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज डाँगीले भने, ‘के कारबाही गरेर छोडियो, मलाई थाहा भएन ।’ नेपालगञ्जमा दिन प्रति दिन बेश्याबृत्ति बढिरहेको छ । प्रहरीले बेश्याबृत्तिलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ ।
शहरका मुख्यचोकहरुमा साँझदेखि अबेर रातीसम्म ग्राहकको पर्खाइमा बस्नेको संख्यामात्रै बढेको छैन कि ठूला होटलमा सहमतिमा जानेको संख्या पनि दिन प्रति दिन बढिरहेको छ ।
‘साना होटलमा प्रहरीले कहिले छापा मार्छ, ठूला त उसले पुरै आँखा चिम्लिन्छ, धन्दावालाको बुझाई हुने गरेको छ । सहमतिमा जाने र पैसामा कुरा नमिलेपछि बलात्कारको आरोप लगाएर प्रहरीमा गएकाको हकमा मात्रै कारबाही भएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा भारतीय शहरबाट पनि नेपालगञ्जमा यौनका ग्राहकहरु आउने गरेका छन् । यी पैसावालको रोजाई भने ठूला होटल नै हुन्छन् ।
होटलहरुले पनि पूरा नाम, ठेगानासहित इन्ट्री गर्दैनन् । उल्लेखित दुई जोडीको हकमा पनि नाम, ठेगाना पूरा लेखिएको थिएन । इन्ट्रीमा मोटरसाइकल कम्पनीको नामको पछाडी सर लगाइएको थियो ।